smartMILE & Co. • HITADY. HITADY. AVERINA.
Mpanolo-tsaina momba ny asa
Lozisialy, serivisy ary loharano nankatoavin'ny indostria
Lozisialy malaza 5 ambony indrindra
Tadiavo ny rindrambaiko rehetra ⟶
Fampiasana ny interface
Anisan'izany ny endri-javatra
Apps & fampidirana
Serivisy mpanjifa & CRM, Fitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa (CRM)
Mety indrindra amin'ny
Jereo ny vidiny pipedrive.com ↗
Fiaraha-miasa, Fitantanana tetikasa
Jereo ny vidiny monday.com ↗
Fifandraisana, Fitantanana ny haino aman-jery sosialy
Jereo ny vidiny crowdfireapp.com ↗
Fifandraisana, Fanovana horonan-tsary
Jereo ny vidiny promo.com ↗
IT & Security, Fitantanana ny tenimiafina
Jereo ny vidiny 1password.com ↗
Mikaroka. Tadiavo. Avereno.
Mikaroka rindrambaiko ho an'ny filan'ny orinasa rehetra
Serivisy mpanjifa & CRM
Raha nanontany ny olona aho hoe inona no tadiaviny, dia ho nilaza ny soavaly haingana kokoa izy ireo.
Tsy kisendrasendra velively ny famokarana. Izany dia vokatry ny fanoloran-tena ho amin'ny fahalavorariana, drafitra manan-tsaina ary ezaka mifantoka.
Raha mandany fotoana be loatra ianao hieritreritra zavatra iray, dia tsy ho vitanao mihitsy izany.
Tsy mahafantatra izay tokony hatao fa manao izay fantatrao.
Matetika ny olona tsy mahalala fa tsy azo ihodivirana ny fahombiazana.
Ny fahatsorana dia midina amin'ny dingana roa: fantaro ny tena ilaina, esory ny ambiny.
Afaka manao na inona na inona ianao, fa tsy ny zavatra rehetra.
Ny fomba hanombohanao dia ny miala amin'ny resaka ary manomboka manao.
Ny tena vidin'ny zavatra rehetra ataonao dia ny habetsahan'ny fotoana takalonao amin'izany.
Ny zava-dehibe dia tsy ny mametraka ny laharam-pahamehanao amin'ny fandaharam-potoananao, fa ny mandamina ny laharam-pahamehanao.
Ny tanjoko dia tsy ny hahavita be intsony, fa ny hanan-javatra kely kokoa.
Ny tena tsy fivadihana dia manao ny tsara, mahafantatra fa tsy hisy hahalala na nanao izany ianao na tsia.
Mitadiava rindrambaiko malaza
SAMBATRA ALAHADY :)
Professional freelancer serivisy eo an-tananao
Ny tsara indrindra ho an'ny tetibola tsirairay
Mitadiava serivisy avo lenta amin'ny vidiny rehetra. Tsy misy sarany isan'ora, fa vidin'ny tetikasa fotsiny.
Vita haingana ny asa kalitao
Tadiavo ny tsara freelancer hanomboka hiasa amin'ny tetikasanao ao anatin'ny minitra.
Fandoavana voaaro, isaky ny mandeha
Fantaro foana izay aloanao mialoha. Tsy avoaka ny karamanao raha tsy ankatoavinao ny asa.
24 / 7 mitondra
Fanontaniana? Mahazoa fanohanana isan'andro hanampy amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza.
GOOGLE CHROME dia mangatsiatsiaka
Reviews ny Software & Services
Rindrambaiko & Serivisy
Enga anie 16, 2022
Enga anie 15, 2022
Mety hiditra amin'ny onjam-peo mivantana ny Netflix hanakana anao tsy hisoratra anarana
Ny Steam Deck dia mahazo famahana ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny Windows 11
Ny AMD dia mamely mafy ny Intel satria ny tsenan'ny CPU dia mahatratra ny avo indrindra amin'ny fotoana rehetra
Nahoana no tsy maintsy lalao finday aloha ny Diablo Immortal
Araraotina ny bibikely famonoana an-tanety Zyxel
Nosoratan'i Chris Duckett, Tonian'ny APAC Chris Duckett Tonian'ny APAC Chris dia nanomboka ny asa fanaovan-gazety tamin'ny 2006 ho Tonian'ny Builder AU taorian'ny nidirany tamin'ny CBS ho programmer. Taorian'ny fivahinianana Kanadiana dia niverina tamin'ny 2011 ho Tonian'ny TechRepublic Australia izy, ary ankehitriny dia Australian...
Mampanantena fifidianana 1 miliara dolara ny mpiasa hanohanana ny indostria eo an-toerana
Electronics: Fanadihadiana natao tamin'ny Lab
Enga anie 10, 2022
Intel 'Alder Lake HX' navoaka: CPU vaovao faha-12 nandoro toeram-piasana finday
Intel androany dia nanaisotra ny ridao teo amin'ny sehatra processeur "HX" andiany faha-12, ny ambaratonga matanjaka indrindra amin'ny silisiôna "Alder Lake" ho an'ny solosaina finday. Ny HX dia natao hampiasaina amin'ny toeram-piasana finday sy solosaina finday avo lenta. Ny chips HX dia hapetraka eo ambonin'ny 12th Gen H sy ...
Hands On: Lenovo's 2022 Legion 7 & 7 Slim Gamers dia mamerina ny Ryzen sy Core Chips
Lenovo androany dia nanambara fanampim-baovao 16-inch vaovao amin'ny filaharana solosaina finday, ny Legion 7 Slim (sy ny 7i Slim, manondro ny Intel CPU), ary koa ny Legion 7 (sy ny Legion 7i). Ireo milina ireo dia mifikitra amin'ny fomba Legion-laptop hitanay tato anatin'ny roa taona lasa,...
OLED & 'Alder Lake': 2022 Asus Zenbook Pros Pack Power, fampisehoana manjelanjelatra (indraindray, roa)
Asus dia manohy ny fampiasam-bolany amin'ny solosaina finday roa-efijery sy ny teknolojia fampisehoana OLED, manambara modely roa misy OLED, ny Zenbook Pro 14 Duo OLED ary ny Zenbook Pro 16X OLED. Na dia mazava ho azy aza fa mizara ny teknolojian'ny efijery OLED iraisan'izy ireo, tsy mitovy amin'ny endriny sy ny tanjona. Afaka...
Torolàlana momba ny diplaoma 2022: Ny solosaina finday tsara indrindra ho an'ny karazana diplaoma tsirairay
Ny manam-pahaizanay dia nanandrana vokatra 130 tao amin'ny sokajy solosaina finday tamin'ny taona lasa Hatramin'ny 1982, PCMag dia nanandrana sy nanome vokatra an'arivony hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara kokoa amin'ny fividianana. (Jereo ny fomba fitilianay.) Raha vonona ny hanakalo ny satrokao sy ny akanjonao ianao amin'ny fanao mahazatra (na pataloha hatsembohana sy...
Enga anie 6, 2022
AMD dia mitondra ny Architecture CPU Zen 3 amin'ny Chromebook miaraka amin'ny Ryzen 5000 C-Series
Ny AMD dia manomana ny lalana ho an'ny Chromebook mahery kokoa amin'ny alàlan'ny fitondrana ny maritrano Zen 3 ho an'ny solosaina finday Google. Ny vokatr'izany dia ny chips Ryzen 5000 C-Series, izay hanomboka ho tonga ao amin'ny Chromebooks hatomboka amin'ny Jona sy Jolay. Ny chip mahery indrindra ao amin'ny fianakaviana dia ny ...
Tsy maintsy hapetraka tsy ho ela izy io, fa amin'ity fanoratana ity ny solosaina finday haingana indrindra ao amin'ny angon-drakitra benchmark-mihazona ny isa ambony indrindra amin'ny vokatra PCMark 10 sy ny tahan'ny frame amin'ny roa amin'ireo fitsapana lalao telo tena misy antsika - tsy Alienware na Razer ary tsy mitentina $3,000 na mihoatra. Izy io dia ny MSI ...
Desambra 30, 2021
Mandeha miaraka amin'ny finday tena hafahafa ny 'Mozean'ny finday' virtoaly
Nahita finday bibidia aho tamin'ny androko. telefaonina lokomena. telefaonina makiazy. Telefaonina toa an'i Shrek. Ankehitriny ny finday hafahafa rehetra amin'ny tantara dia tafangona ao amin'ny Mozea finday mahagaga, fampirantiana virtoaly avy amin'ny ekipa iray tarihin'ny mpandalina Ben Wood, izay manolotra finday mihoatra ny 2,000...
Voaisa ve ny andron'ny drafitra finday $10?
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra momba ny indostrian'ny finday any Etazonia dia ireo mpandraharaha virtoaly mora vidy be. Ny orinasa toa an'i Tello, Ting, ary US Mobile (rehetra hita ao amin'ny tantarantsika momba ny drafitra finday mora indrindra) dia manolotra drafitra resaka sy lahatsoratra amin'ny latsaky ny $10, ary drafitra data ho an'ny tsy...
Desambra 29, 2021
Ny finday tsara indrindra ho an'ny zokiolona amin'ny 2022
Mila mifandray ny tsirairay. Ny zokiolona, ​​izay mety mitoka-monina amin'ny fianakaviany na manana filana ara-pahasalamana manokana, dia tsy tokony havela. Ny indostrian'ny smartphone, amin'ny ankapobeny, dia tsy mieritreritra ny filana manokana amin'ny tsenan'ny zokiolona, ​​​​fa raha mandinika ianao dia afaka mahita mpitatitra sy finday...
AirTag vs. Tile: Iza amin'ireo Bluetooth Tracker no tokony hofidinao?
Raha miantsena mpanara-maso Bluetooth ianao amin'ity vanim-potoanan'ny fialantsasatra ity, dia azo inoana fa misafidy AirTag sy Tile ianao. Apple dia azo inoana fa nalaza ny sokajy tamin'ny AirTag, fa ny Tile (izay vao avy nalain'ny orinasa rindrambaiko fanaraha-maso fianakaviana Life360) dia efa ela kokoa tao amin'ny lalao ary manana ...
Efa nandinika thermostats ambany voly be dia be ho an'ny rafitra fanafanana entona sy solika izahay, fa ny Sinope TH1123WF ($114.95) dia thermostat maranitra maranitra malefaka ho an'ny rafitra fanamainana elektrika. Mamela anao hifehy ny hafanana ao an-trano ianao amin'ny alàlan'ny telefaona, na amin'ny feonao amin'ny alàlan'ny Alexa, Google Assistant, na Siri voice...
Ny vacuum robot tsara indrindra ho an'ny volon'ny biby
Isika rehetra dia tia ny biby fiompintsika, fa ny fandatsahan-dra dia mety ho fanaintainana lehibe. Raha manana saka na alika mamela volom-borona manerana ny trano ianao, dia azonao atao ny mieritreritra ny hampiasa vola amin'ny vacuum robot izay afaka manaisotra ny adidy fanadiovana amin'ny takelakao. Tsy misy tsy fahampian'ny modely...
Robot mops tsara indrindra ho an'ny 2022
Tsy misy olona tia mopping. Manomboka amin'ny siny feno rano maloto, ka hatramin'ny fibre maloto (sy maloto), dia asa be asa izay tena mila fanavaozana. Soa ihany fa tonga ny robot mops hanamora ny fiainanao. Ny hany ataonao dia ny mameno ny tanky, tsindrio ny fanombohana,...
Ny lakolosy am-baravarana tsara indrindra amin'ny 2022
Fomba iray mora hiarovana anao amin'ny halatra fananana, fanafihana trano, piraty lavarangana, ary na ireo mpisolovava tsy ilaina aza dia ny mamantatra hoe iza no eo am-baravaranao alohan'ny hanokafana ny varavarana. Ampidiro ny lakolosim-baravarana video, fiarovana voalohany ho an'ny tompon-trano izay tsy mamela anao hahita sy hiresaka amin'ny...
Kaonty sy fitantanam-bola
Software Accounting ho an'ny mpiasa tena
Rindrambaiko fitantanana kaonty maimaimpoana
Fitantanana momba ny kaonty (13)
Tetibola sy fanaraha-maso (122)
Rindrambaiko momba ny tetibola maimaim-poana
Tatitra ara-bola (167)
Fikarohana hosoka (55)
Fitantanana fanomezana (11)
Fitantanana ny fampiasam-bola (40)
Fitantanana fampindramam-bola (23)
Fandoavana sy faktiora (318)
Software faktiora maimaim-poana
Rindrambaiko faktiora ho an'ny Mpandraharaha & Freelancers
Software faktiora ho an'ny orinasa madinika
Fividianana sy fandaniana (96)
Software mitatitra ny fandaniana maimaim-poana
Fitantanana risika (91)
Trading & FX (17)
Fitantanana ny hetra (43)
Fitsapana A/B (67)
Artificial Intelligence (AI) (373)
Takelaka data (239)
Takelaka data (48)
Takelaka data (144)
Fanadihadiana talantalana nomerika (8)
Takelaka data (6)
Fanadihadiana finday (61)
Fanadihadiana vinavina (177)
Dashboard tatitra (289)
Fandraketana fivoriana (26)
Famakafakana statistika (15)
Fikarohana hita maso (9)
Web Analytics (116)
Fitantanana ny birao (20)
Business Modeling (25)
Kalandrie & Fandaharam-potoana (152)
Software fandrindrana ho an'ny trano fisakafoanana
Software fandaharam-potoana ho an'ny orinasa madinika
Software fandaharam-potoana ho an'ny fanorenana
Maimaim-poana ny Fandaharana Fandaharana Software
Fitantanana fananana nomerika (104)
Famoronana antontan-taratasy (35)
Fitantanana ny antontan-taratasy (226)
Software Fitantanana ny antontan-taratasy ara-dalàna
Famindrana sy fizarana rakitra (101)
Fitantanana hevitra (76)
Fandefasana hafatra sy chat (126)
Fitantanana fahalalana (110)
Fanamarinana an-tserasera (14)
Tetikasa fiaraha-miasa (286)
Auto Dialer (26)
Fitantanana Call Center (70)
Software Call Center ho an'ny orinasa madinika
Fanaraha-maso ny antso (14)
Tambajotran'ny mpiasa (14)
Fifandraisana anatiny (176)
Small Business Intercommunication Software
Fifandraisana iraisana (88)
Fihaonambe video (91)
Software VoIP maimaim-poana
Rafitra fanendrena (99)
Fitantanana ivom-pifandraisana (86)
CRM mpampiasa tokana
CRM ho an'ny orinasa madinika
CRM ho an'ny trano
CRM namboarina ho an'ny GSuite
Chat mpanjifa (163)
Platform Data ho an'ny mpanjifa (37)
Fifandraisana amin'ny mpanjifa (326)
Software Success Customer
traikefa amin'ny mpanjifa (261)
Serivisy mpanjifa (237)
Software serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ny orinasa madinika
Fitantanana tamberina (141)
Ny tsy fivadihana sy ny maha-mpikambana (85)
Software ho mpikambana ho an'ny Fikambanana
CRM fampindramam-bola (12)
Fanohanana lavitra (46)
Famandrihana & Famandrihana an-tserasera (108)
Fanadihadiana sy fitsapan-kevitra (114)
Biraon'ny tapakila sy fanampiana (87)
Fitantanana mpitsidika (49)
Fanontam-pirinty 3D (9)
Famokarana votoaty & Fitantanana (97)
Famolavolana sary (118)
Fanovana sary (66)
Lozisialy fanitsiana sary maimaim-poana
Infographics / Charts (30)
Rafitra famakiam-boky (18)
Famolavolana Logo (30)
Media Stock Files (26)
Fanovana horonan-tsary & 3D (75)
Fanovana horonan-tsary sy rindrambaiko 3D maimaim-poana
Zava-misy virtoaly (12)
Fampianarana sy fianarana
Fitaovana fanoratana (57)
Rafitra fitantanana fianarana (LMS) (217)
Software fanofanana orinasa
Fivarotana firaketana fianarana (LRS) (13)
Mianara mampiasa code (14)
Fitantanana sekoly (52)
Startups / Business (79)
Hevitra 360 degre (74)
Fitantanana ny tsy fisiana sy fialan-tsasatra (138)
Rafitra fitantanana ny tsy fisian'ny maimaim-poana
Fanaraha-maso ny mpangataka (ATS) (144)
Free Software Tracking Applicant
Fanaraha-maso ny mpanatrika & famantaranandro (208)
Software fanaraha-maso ny fotoana ho an'ny Freelancers
Fitantanana ny tombontsoa (76)
Fitantanana onitra (38)
Fanoloran-tena ho an'ny mpiasa (10)
Fifandraisana amin'ny mpiasa (122)
Fanaraha-maso ny mpiasa (184)
Software Productivity ny mpiasa
Fahasalamana amin'ny mpiasa (79)
Fitantanana mahaleotena (11)
Fandaharam-potoana HR (113)
Software fandrindrana maimaim-poana
Human Resources (HR) (410)
Software HR ho an'ny orinasa madinika
Fitantanana ny fananan-tsaina (6)
Fitantanana ny karama (149)
Software Payroll ho an'ny orinasa madinika
Fampisehoana sy fanombanana (140)
Rindrambaiko fanombanana ny fahombiazan'ny orinasa madinika
Fandraisana mpiasa sy fampiharana (203)
Software Recruit ho an'ny orinasa madinika
Fitsapana fandraisana mpiasa (59)
Fampiofanana sy fandraisana (204)
Resadresaka video (53)
Fitantanana mpiasa (307)
Software fitantanana mpiasa ho an'ny foibe antso
Academia & Education (166)
Mpivarotra fiara (7)
Fikarakarana zaza (16)
Fitantanana ny Fiangonana (10)
Fitsapana klinika (17)
Tombana amin'ny fanorenana (12)
Software fanombantombanana ny fanorenana
Fitantanana ny fananan-tany (CREM) (28)
Fitantanana mpamatsy vola (18)
Firaketana ara-pitsaboana elektronika (58)
Fialamboly & Media (52)
Fitantanana ny toeram-pambolena (4)
Sampandraharaha ara-bola (184)
Fahasalamana sy fahasalamana (70)
Software fanofanana manokana
Sakafo sy zava-pisotro (64)
Rafitra fampahalalana ara-jeografika (GIS) (11)
Fitantanana trano fandraisam-bahiny (79)
Software famandrihana ho an'ny hotely
Software Insurance ho an'ny Agents
Fitantanana firavaka (7)
Software fitantanana fampiharana lalàna
Rindrambaiko ara-dalàna ho an'ny fitantanana raharaha
Manufacturing & Engineering (94)
Faktiora ara-pitsaboana (33)
Tsy mitady tombontsoa sy an-tsitrapo (63)
Software Fanangonam-bola tsy mitady tombontsoa
Solika sy entona (27)
Indostria hafa (34)
Fanaraha-maso ny bibikely (3)
Fitantanana fananana (96)
Rindrambaiko fitantanana fananan-tany
Fitantanana trano fisakafoanana (101)
Software Fitantanana Inventory ho an'ny trano fisakafoanana
Restaurant POS (53)
Software antsinjarany ho an'ny orinasa madinika
Fitantanana fiarovana (51)
Fitantanana Salon (30)
Software famandrihana Salon
Lozisialy Famolavolana Solar & Soso-kevitra
Fitsidihana sy fizahan-tany (93)
Fitantanana ny biby (6)
Fitantanana API (67)
Mpamorona fampiharana (130)
Fanaraha-maso ny fahombiazan'ny fampiharana (APM) (99)
Fanaraha-maso ny bibikely (38)
Click Fraud (12)
Code Editors (21)
Code Repository (21)
Tambajotra fanaterana votoaty (CDN) (29)
Software fanaraha-maso olana
Domains sy fampiantranoana (66)
Mpanorina tranokala mora (138)
Lozisialy Mpanorina tranokala maimaim-poana
Tariho Ary Atsaharo ny Software Mpanorina Tranonkala
Vahaolana eCommerce (425)
Software Mpanorina tranokala eCommerce
Software eCommerce Shopping Cart
Electronic Data Interchange (EDI) (21)
Fitantanana Identity & Access (108)
Fitantanana fanovana IT (14)
Fitantanana IT (182)
IT Service Management (ITSM) (78)
Fanavaozana lova (16)
Fianarana milina (120)
Mpanome tolotra fitantanana (MSP) (63)
Fitantanana fitaovana finday (MDM) (29)
Fitantanana tambajotra (83)
Fanaraha-maso tambajotra (36)
Fitantanana ny tenimiafina (44)
Platform ho serivisy (PaaS) (158)
Sarety fiantsenana (61)
Sign On (SSO) (25)
Fikarohana tranokala sy endrika an-tranonkala (54)
Fitantanana famandrihana (80)
Fitantanana ny rafitra (47)
Efitrano data virtoaly (6)
Fotodrafitrasa Desktop virtoaly (VDI) (14)
Dokam-barotra & Affiliate (199)
Fitantanana marika (153)
Fanentanana sy tanjona (272)
Software Planning Marketing
Marketing votoaty (292)
Famantarana nomerika (67)
Software Outreach mailaka
Software Data mailaka
Rindrambaiko marketing amin'ny mailaka maimaim-poana
Marketing Analytics (313)
Marketing Automation (474)
Marketing Automation Software ho an'ny orinasa madinika
PR & Fandraisana (63)
Referral Marketing (51)
Fitantanana laza (95)
Software SEO maimaimpoana
Media sosialy (322)
Social Media Fandaharam-potoana Software
Software hacking amin'ny fitomboan'ny media sosialy
Ny hafa (98)
Malalaka sy fomba hafa (104)
Fitantanana ny tetikasa Agile (126)
Fanaraha-maso ny fananana (76)
Fitantanana ny loka (10)
Fitantanana orinasa (277)
Business Process Management (BPM) (167)
Fitantanana tetikasa famoronana (133)
Fitantanana angovo (5)
fanofana fitaovana (19)
Fitantanana hetsika (159)
Software fitantanana hetsika ho an'ny tsy mitady tombony
Fitantanana trano (61)
Fitantanana ny serivisy (FSM) (179)
Software Dispatch Service
Rindrambaiko fitantanana serivisy ho an'ny orinasa madinika
Software Fandaharam-potoana amin'ny serivisy
Fitantanana fananana raikitra (27)
Fitantanana fiaramanidina (78)
Fitantanana, risika ary fanarahan-dalàna (GRC) (123)
Fitantanana vondrona (26)
Fikambanan'ny tompon-trano (HOA) (7)
Software Fitantanana Inventory ho an'ny Varotra
Software Tracking Inventory
Software Fitantanana Inventory ho an'ny orinasa madinika
Fitantanana tetikasa IT (95)
Fitantanana lisansa (13)
Fitantanana ny filaminana (134)
Fitantanana politika (6)
Fitantanana fampahalalana momba ny vokatra (PIM) (58)
Fitantanana ny fiainan'ny vokatra (PLM) (24)
Fitantanana ny vokatra (92)
Fitantanana tetikasa (404)
Software fitantanana tetikasa fanorenana
Software Management Project an-toerana
Fitantanana Portfolio Tetikasa (105)
Fitantanana ny loharanon-karena (120)
Tetikasa Workflow (32)
Fitantanana Spa (31)
Fandrindrana stratejika (22)
Fitantanana rojo famatsiana (172)
Fitantanana ny asa (272)
Fitantanana ny fotoana (162)
Fitantanana fitaovana (22)
Trano fanatobiana entana sy fandefasana (111)
Automation workflow (25)
Fitantanana ny workflow (150)
Lamina asa (41)
Kalandrie & Notebook (29)
Fitantanana tanjona (31)
Fitaovana famokarana (244)
Ampifanaraho amin'ny vidiny (CPQ) (39)
Fifanarahana & sonia (81)
Fitantanana fifanarahana (94)
Faminaniana sy naoty (42)
Fampidirana Lead (98)
Famoronana mpitarika (246)
Toeram-pivarotana (POS) (161)
Software Point of Sale (POS) ho an'ny varotra
Fitantanana ny tolo-kevitra (41)
Fampandehanana varotra (31)
Fitantanana ny varotra (296)
Famaritana momba ny varotra (43)
Accounting & Finance SoftwareAccounting & Finance
Ny orinasa dia afaka mitahiry fotoana sy vola amin'ny fitantanam-bola sy fitantanam-bola amin'ny fampiasana vokatra mety amin'ity sokajy ity. Misy vokatra fototra ho an'ny fitahirizam-boky tokana. Na, azonao atao ny misafidy rafitra fidirana indroa izay manampy amin'ny fitazonana ny fivarotana sy fividianana boky na manara-maso ny fifanakalozana ara-bola. Ny vokatra avo lenta kokoa dia matetika ahitana ny fahafahana manao kajy hetra, mamorona sy mandefa faktiora, mamorona tatitra ara-bola, manodina ny karama, ary mandefa fampahatsiahivana ho an'ny fandoavam-bola. Azonao atao ny mahita fampahalalana bebe kokoa momba ireo vokatra amin'ity sokajy ity ao amin'ny torolàlana momba ny rindrambaiko kaonty sy fitantanam-bola.
Software Analytics & IntelligenceAnalytics & Intelligence
Ny vokatra rindrambaiko amin'ity sokajy ity dia manampy amin'ny famadihana ny angon-drakitra momba ny orinasa manta ho fampahalalana mahasoa izay matetika manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra entin'ny data. Ny karazana rindrambaiko analyse samihafa dia mety amin'ny filana samihafa. Ohatra, ny rindrambaiko analytics mpanjifa dia manampy hamantatra ny olana mahazatra momba ny serivisy mpanjifanao. Amin'ny lafiny iray, ny analytics marketing dia afaka manampy anao hampitaha ny valin'ny fampielezan-kevitrao momba ny varotra ary hahita hoe iza amin'ireo teknika ara-barotra mety indrindra amin'ny orinasanao. Ireo rehetra ireo amin'ny farany dia manampy anao handray fanapahan-kevitra ara-barotra bebe kokoa. Raha tsy azonao antoka hoe inona ny vokatra hofidiana na ny fomba hifidianana azy dia diniho ny mamaky ny torolàlana momba ny rindrambaiko analytics & intelligence.
Ny ankamaroan'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa amin'ny finday, noho izany ny fangatahana rindrambaiko fiaraha-miasa izay manampy ny ekipa lavitra hiara-hiasa amin'ny fomba mahomby dia tsy mbola nahery toy izany. Ny vokatra amin'ity sokajy ity dia manamora ny fifandraisana amin'ny fotoana tena izy, ny fitehirizana sy ny fizarana antontan-taratasy, ny fitantanana ny asa ary ny fitantanana ny workflow. Hahita vokatra natao manokana hanamora ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa, fitantanana fahalalana, fitantanana hevitra ary fandefasana hafatra eo noho eo ihany koa ianao. Misy ihany koa ny fitaovana fiaraha-miasa amin'ny tanjona rehetra izay manolotra zavatra amin'ny zava-drehetra. Tokony hifidy vokatra iray ianao arakaraka ny haben'ny fikambananao sy ny filanao fiaraha-miasa. Ohatra, ny orinasa lehibe iray manana mpiasa an-jatony miasa amin'ny toerana maro dia mety mila vokatra izay manampy amin'ny fitadiavana resaka taloha mora kokoa. Afaka mianatra bebe kokoa momba ity sokajy rindrambaiko ity ianao avy amin'ny torolàlana rindrambaiko fiaraha-miasa.
Ny vokatra amin'ity sokajy ity dia natao hanampiana amin'ny fanamorana ny fifandraisana eo amin'ny ekipa, ny mpiara-miasa, ny mpanjifa ary ny mpitantana. Ity karazana rindrambaiko ity dia manampy amin'ny fampifandraisana ireo solosaina na fitaovana finday maro avy lavitra, ahafahan'ny mpampiasa mifanakalo hafatra na rakitra amin'ny endrika isan-karazany, ao anatin'izany ny endrika lahatsoratra, feo ary horonan-tsary. Eo ambanin'ity sokajy ity dia hahita vahaolana rindrambaiko mailaka isan-karazany ianao, programa famelabelarana, vahaolana VoIP, sns. Misy ihany koa ny vokatra mety amin'ny fihaonambe amin'ny Internet, resaka video, ary fifandraisana anatiny. Manome antsipiriany bebe kokoa momba ny vokatra amin'ity sokajy ity ny torolalana rindrambaikon'ny serasera.
Serivisy mpanjifa & Software CRM Serivisy mpanjifa & CRM
Ny vokatra amin'ity sokajy ity dia manampy amin'ny fanangonana sy fandaminana ny angon'ny mpanjifa ary mitazona azy ireo amin'ny toerana tokana, mba hahafahanao manana fomba fijery 360 degre momba ny mpanjifanao - izay manampy anao hanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny farany, hanorina ary hihazona fifandraisana maharitra amin'ny mpanjifa. Ny vokatra isan-karazany dia mifantoka amin'ny lafiny isan-karazany amin'ny serivisy mpanjifa sy CRM, toy ny fanohanana sy fanampiana, fitantanana ny valin-kafatra, fitantanana faritany fivarotana, ary automatique ny varotra. Ny lozisialy CRM mandroso kokoa dia manasongadina ny fahafahana mamakafaka ny angon-drakitra mpanjifa ary manampy anao hahazo fahalalana momba ny fitondran-tenan'ny mpanjifa. Raha te hahalala bebe kokoa momba an'ity sokajy rindrambaiko ity ianao dia afaka mitsidika ny serivisy mpanjifa & torolàlana rindrambaiko CRM.
Software Design & MultimediaDesign & Multimedia
Miaraka amin'ireo mpivarotra eran'izao tontolo izao shiftNy fifantohana amin'ny votoaty hita maso, ny famolavolana ary ny vahaolana multimedia dia tena ilaina ankehitriny. Ity karazana rindrambaiko ity dia manampy anao hamorona, hanova ary hitantana sary, horonan-tsary, logos, sary ambadika ary infografika. Eo ambanin'ity sokajy ity dia hahita vokatra isan-karazany ianao mifantoka amin'ny sehatra samihafa amin'ny famolavolana sy multimedia, toy ny, famolavolana sary, famolavolana logo, fanovana horonan-tsary, ary fanovana sary. Raha mikasa ny hividy vokatra avy amin'ity sokajy ity ianao dia hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara ny torolàlana momba ny famolavolana sy rindrambaiko multimedia.
Software Fanabeazana & FianaranaFanabeazana & Fianarana
Ny ankamaroan'ny vokatra amin'ity sokajy ity dia mikendry ny hanampy ireo fikambanana amin'ny asa fanaterana, fanaraha-maso, tatitra na fitantanana programa fanofanana an-tserasera. Hahita lozisialy fanabeazana & fianarana koa ianao izay ahafahanao manomana, mamolavola, manendry ary manombana ny taranja fiofananao manokana. Ny vokatra sasany dia manampy anao hianatra kaody, ny hafa kosa natao hanampiana ireo fanombohana hanome fiofanana ho an'ny mpiasa. Mety hahazo fidirana maimaim-poana amin'ny sehatra fanabeazana sasany aza ianao. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny fampitahana sy fisafidianana rindrambaiko avy amin'ity sokajy ity dia diniho ny famakiana ny torolàlana momba ny rindrambaiko fanabeazana & fianarana.
Human Resources SoftwareHuman Resources
Ity sokajy ity dia ahitana vokatra izay manampy amin'ny automatique ny asan'ny HR an'ny fikambanana, toy ny fitehirizana angon-drakitra momba ny mpiasa, ny fandoavana ny karama, ny fitantanana ny fandaharan'asan'ny tombontsoa, ​​ary ny fanaraha-maso ny zava-bita. Notanisainay teo ambanin'ny sokajy samihafa ireo vokatra, mba hahafahanao mifantoka haingana amin'ny vokatra ao amin'ny faritra mety. Na izany aza, ny vahaolana samihafa eo ambanin'ny sokajy iray dia mety manana fomba fiasa hafa amin'ny famahana olana iray ihany, ary mety miovaova araka izany ny endri-javatra. Noho izany dia tokony hampitaha sy hisafidy amim-pahendrena. Azonao atao ny mamaky ny torolàlana momba ny lozisialy momba ny maha-olona raha mila fanazavana fanampiny momba ny zana-kajy tsirairay.
Industry Specific SoftwareIndustry Specific
Eo ambanin'ity sokajy ity dia hahita vahaolana mifanaraka amin'ny filan'ny indostrian'ny niche anao ianao. Ohatra, ny vokatra natao manokana ho an'ny indostrian'ny fahasalamana dia matetika manampy amin'ny fitantanana ny fandaharam-potoana. Ny vokatra sasany aza dia mampandre anao rehefa misy marary miditra na mivoaka. Hahita vahaolana manokana momba ny indostria ho an'ny sehatra maromaro ianao, ao anatin'izany ny akademia & fanabeazana, fialamboly & haino aman-jery, fitsangatsanganana & fizahan-tany, ary fanorenana. Mba hahazoana topimaso amin'ny sokajy rehetra dia azonao atao ny mamaky ny torolàlana momba ny rindrambaiko manokana momba ny indostria.
Ny vokatra amin'ity sokajy ity dia manampy ny orinasa mitantana ny asany mifandraika amin'ny IT, ao anatin'izany ny famolavolana tranokala, ny fampivoarana ny fampiharana, ny fampiantranoana, ny fitantanana ny tenimiafina ary ny fitantanana famandrihana. Hahita vahaolana manampy amin'ny fanatsarana ny fifandraisana, ny fitantanana ny angona, ny varotra ary ny fahombiazan'ny varotra ianao. Ny vokatra rindrambaiko IT & fiarovana sasany dia tonga miaraka amin'ny endri-javatra izay manampy amin'ny famantarana, misoroka ary miaro amin'ny fanafihana maloto na farafaharatsiny mametra ny halehiben'ny fahasimbana amin'ny fanafihana toy izany. Betsaka ny fampiharana azo alaina, ka ny tsirairay amin'izy ireo dia mifantoka amin'ny lafiny samihafa amin'ny IT & Security. Azonao atao ny mamaky ny torolàlana momba ny rindrambaiko IT & Security raha te hahalala bebe kokoa momba ny safidy rehetra misy.
Ireo vokatra ireo dia manampy amin'ny drafitra sy fanatanterahana ny fampielezan-kevitra ara-barotra ary manara-maso ny asa ara-barotra sasany, toy ny famokarana fitarihana, ny marketing amin'ny mailaka, ny fitantanana ny media sosialy, ary ny fanatsarana ny milina fikarohana. Ny vokatra mety dia ahafahanao mamantatra sy mandray anjara amin'ny mpanjifa mety, mampitombo sy mitazona fifandraisana amin'izy ireo, ary mijery ny vokatry ny fanentanana ara-barotra ataonao. Ny endri-javatra manan-danja tokony hotadiavina dia ny fampidirana CRM, ny fahaiza-mitarika isa, ny fizarana mpanjifa, ary ny fahaizana mitaiza fitarihana na manao fampielezan-kevitra mailaka voatondro. Raha te hianatra bebe kokoa momba ireo karazana rindrambaiko marketing isan-karazany dia azonao atao ny mamaky ny torolàlana momba ny rindrambaiko marketing.
Ity sokajy ity dia ahitana vokatra tsy mifanaraka amin'ny sokajy rindrambaiko mahazatra. Raha mitady vokatra miavaka na tsy mahazatra ianao dia mety ho hitanao eto. Vakio ny torolàlana rindrambaiko isan-karazany raha mila fanazavana fanampiny momba ny vokatra amin'ity sokajy ity.
Operations Management SoftwareOperations Management
Ny lozisialy fitantanana ny fampandehanan-draharaha dia manao automatique ny asa fandraharahana sasany mba hanampy amin'ny fanatsarana ny fomba famokarana, fanaterana ary fivarotana ny vokatra na serivisy. Midika izany fa ny rindrambaiko fitantanana fampandehanana mety dia manampy anao hanomana sy hanatanteraka ny fizotran'ny fandraharahanao amin'ny fomba mahomby kokoa. Ny vokatra samihafa amin'ity sokajy ity dia mifantoka amin'ny sehatra samihafa amin'ny fitantanana ny asa, ao anatin'izany ny fitantanana ny tetikasa, ny fitantanana ny asa, ny fitantanana ny filaminana ary ny fitantanana hetsika. Hahita rindrambaiko mety kokoa amin'ny indostria sasany ihany koa ianao. Raha tsy azonao antoka hoe inona ny vokatra tokony hofidinao dia diniho ny mamaky ny torolàlana momba ny rindrambaiko fitantanana ny fandidiana.
Ity karazana rindrambaiko ity dia mikendry ny hanampy ny olona hiasa amin'ny fomba mahomby kokoa. Ohatra, ny vahaolana sasany dia mety hanampy anao hametraka tanjona, hanara-maso ny fotoana hamitana asa iray, hanara-maso ny fivoaranao, na hahitana ny fomba laninao amin'ny ordinatera. Hahita lozisialy manampy amin'ny fanatsarana ny vokatra koa ianao. Ohatra, raha manoratra ianao dia mety hitady vahaolana izay manamarika ny fahadisoana ara-pitsipi-pitenenana na manome soso-kevitra voambolana. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny vokatra amin'ity sokajy ity ianao dia afaka mamaky ny torolàlana momba ny rindrambaiko manokana.
Ny vokatra amin'ity sokajy ity dia natao hanampiana ireo fikambanana hahatratra ny tanjon'ny varotra tsy tapaka. Ny lozisialy varotra matetika dia manampy amin'ny andraikitry ny fampivoarana ny varotra, ny fitantanana ny varotra varotra, ny fandrindrana ary ny fanatanterahana paikady momba ny varotra. Ireo mpitantana ny varotra dia mampiasa ireo vokatra ireo mba hahalalana ireo tondro fampandehanana fototra ary hametraka tanjona amin'ny varotra mifanaraka amin'izany. Hahita vahaolana rindrambaiko momba ny varotra mifantoka amin'ny famokarana fitarihana, fitantanana fitarihana ary vinavinan'ny varotra ianao. Tokony hifidy vokatra ianao arakaraka ny haben'ny ekipan'ny varotrao, ny tanjon'ny varotrao ary ny faritra ifantohan'ny orinasanao. Ny famakiana ny torolàlana momba ny rindrambaiko momba ny varotra dia hanampy anao hisafidy ny vokatra mety amin'ny orinasanao.
Be loatra? Manome fotoana bebe kokoa
Miaraha miasa amin'ny tambajotra matihanina tsy miankina lehibe indrindra ary manatanteraka zavatra, manomboka amin'ny fihodinana haingana mankany amin'ny fiovana lehibe.
Fampandrosoana & IT • Famolavolana & famoronana • Varotra & Varotra • Fanoratra & Fandikan-teny • Fanohanana ny Admin & mpanjifa • Fitantanam-bola & Kaonty
Naoty avy amin'ny mpanjifa 4.9 / 5
Diniho ny tsenan'ny asa
Vidiny manomboka amin'ny $5.00/ora
Ny ekipanay dia mitsapa rindrankajy, serivisy ary paikady momba ny fandraharahana an-jatony isan-taona amin'ny alàlan'ny mpanolo-tsainay manokana sy ny vondrona mpitarika orinasa.
Mifidy vahaolana henjana ihany izahay miaraka amin'ny tahan'ny tombotsoa ambony indrindra izay mora ampiasaina, izay miditra am-pahamendrehana amin'ny karazana fikambanana rehetra ary misy endri-javatra lehibe indrindra hiantohana anao hijanona eo amin'ny sehatry ny fandraharahana.
Software tsy maintsy ananana amin'ny 2022
Ny vokatra rehetra dia voafantina sy dinihina tsy miankina. Raha mividy amin'ny alàlan'ny rohy mifandray ianao, dia azo atolotra ny komisiona ho an'ny mpiara-miasa amin'ny mpitsara, izay manampy amin'ny fanohanana ny asany.
© 2022 smartMILE & Co. Zo rehetra voatokana. politika fiarovana fiainan'olona.
® smartMILE & Co. dia marika voasoratra anarana.